बुनपालाई प्रगतीको पथमा लैजानका लागि हामी कटिवद्ध छौँः उपमेयर उम्मेदवार दुलाल (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २८ गते २२:४८ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका माओवादी केन्द्र कि उपमेयर उम्मेदवार होम कुमारी दुलाल “हेमा”संग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
चुनाबी दिन नजिक हुदै गर्दा नगरवासीहरुको पहुँचमा कसरी पुगिरहनु भएको छ ?
हामी प्रत्येक दिन विहान ६ बजे देखि बेलुका ९ः३० बजेसम्म नगरवासीहरुको घर–दैलोमा पुगिरहेका छौँ । नगरवासीहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया आईरहेको छ । उहाँहरुले खुशीका साथ स्वागत गरिरहनु भएको छ । अबको स्थानिय निकायको चुनाबमा हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ ।
कस्तो महशुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले विभिन्न किसिमका राजनैतिक माहोलहरु हेर्दा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको जस्तो महोल अरुको पार्टीको देखिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा हामी देखि अरु पार्टीहरु अलि तर्सिएको जस्तो महशुस भईरहेको छ ।
के कुरामा आफु अब्बल छु जस्तो लाग्छ ?
हामी हरेक जनताको कामको प्रतिवद्धताका साथ नीति, निर्माण र निर्णय अनुसार अगाडी बढेका छौँ । उहाँहरुका सम्पुर्ण समस्याहरुको समाधान गर्दै आफ्नो नगरलाई उन्नति र प्रगतिको पथमा लैजानका लागि हामी कटिवद्ध छौँ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका माओवादी केन्द्र कि उपमेयर उम्मेदवार होम कुमारी दुलाल “हेमा” संगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः